Download Official Theme Rikoooo Jolay - Windows 7 - Rikoooo
Downloads 3 770
Io foto-kevitra no tena tanteraka, izany dia efa natao ho an'ny Windows rehetra 7 dikan, dia ahitana ny efijery-tsary sasany dia 720p Full HD na HD 1080p, diabe ao amin'ny tanteraka mba sendra 20 isaky ny minitra.
Izany foto-kevitra ihany koa ny miova ny feo ho an'ny startup sy ny fanakatonana ny Windows, dia ho afaka hanokatra ny solosaina mba hihaino ny mamy feon'ny fiaramanidina maka eny, ary ny fanakatonana ny feon'ny fiaramanidina fipetrahana, ary rehefa mampihatra ny foto-kevitra, dia afaka na handrenesanay ny feon'ny iray nandalo firindrana, ary farany rehefa hahafoana ny fako, dia hihaino ny feon'ny lozam-piaramanidina.
Ny foto-kevitra ihany koa hanova ny biraonao sary masina, ny fako foana sy feno, ny mpampiasa fampirimana, ny tambajotra kisary, ary hanolo azy tamin'ny sary masina eo amin'ny foto-kevitra ny fiaramanidina. Ny kaonty sary Azo soloina amin'ny alalan'ny sary, naka ny endriky ny Rikoooo (tsy voatery).
Ary ianao dia manana lamba mpamonjy (tsy voatery), izay mirakitra ny-tsary ny mpandresy ny teo aloha efijery. Ary raha te-hanosika tsy fandeferana na dia bebe kokoa, afaka manova ny fidirana lamba (tsy voatery) nofidian'ny ny Top Screen Fifaninanana. Ny dika tsotra ny ity lohahevitra ity dia mirakitra ny tsary efijery sy ny tena sary, feo, sary masina, loko varavarankely 7 Windows.
Ny Full Version (soso-kevitra) ity foto-kevitra ahitana ny tsary efijery sy ny tena sary, feo, sary masina, loko varavarankely Windows 7, ny varavarana lamba mpamonjy misy ny tsary mampiseho ny mpandresy ny teo aloha efijery, ny sary tantara, naka ny endriky ny Rikoooo, ny fidirana lamba amin'ny TOP efijery.
Ilay foto-kevitra tonga tamin'ny antontan-taratasy ilaina rehetra sy ny Tutorials noho ny tokony fampandehanana, ny Tutorials be tsipiriany sy tsara Nanazava tsikelikely sy ny sary (amin'ny teny Frantsay ihany).